Nhengo dzeMDC Dzotiza Mhirizhonga muMbare
Nhengo dzeMDC dzinonzi dziri kutiza mumusha weMbare muHarare
dzichinotsvaga hupoteri munzvimbo dzakasiyana siyana pamwe nepamuzinda webato ravo paHarvest House.
Izvi zvinotevera mhirizhonga iri kuitika munzvimbo iyi. Zvinonziwo Nhengo dze Zanu PF dziri kushungurudza vane dzimba kuitira kuti vadzinge maroja avo anenge achifungidzirwa kuti inhengo dzeMDC.
Imwe yenhengo dzeMDC idzi, Amai Nestai Mapfumo, vaudza studio 7 kuti vava kutyira hupenyu hwavo pamwe nehwemhuri yavo zvichitevera mhirizhonga iyi.
Amai Mapfumo vanoti nhengo dze Zanu PF dziri kuvashayisa mufaro.
Sachigaro weMDC mu Mbare, VaGodfrey Cotton, vati mbatya dzavo dzabuditswa mumba mavo nemuridzi wemba mushure mekunge atyisidzirwawo nenhengo dze ZanuPF idzi.
Amai Mapfumo naVaCotton ndevamwe vevanhu vakatiza muMbare neMuvhuro vari kuchengetwa pamuzinda weMDC paHarvest House zvichitevera mhirizhonga iri kuitika muMbare.
Vatsigiri veMDC vaswera vachiuya pamuzinda uyu kuzotsvaga hupoteri uye vamwe vanonzi vava kutiza muMbare vachinogara hehama dzavo dzinogara mune imwe misha isiri mu mbare makare vachityira hupenyu.
Hazvisati zvanyatsozivikanwa kuti vatsigiri veMDC vatiza mu Mbare vangani pari zvino, uye zvinonzi vamwe vava kupedzisira vave kuita zveZanu PF senzira yokuzvichengetedza.
Amai Mapfumo vakurudzira makurukota anoona nezvinoitika mukati menyika, VaKembo Mohadi ve Zanu PF pamwe na Amai Theresa Makone veMDC, uye nevakuru-vakuru muhurumende yemubatanidzwa kuti vawone zvavangaite kuitira kuti mhirizhonga iri kuitwa mu Mbare ipere nechimbichimbi.
Pave nemasvondo maviri zvinhu zvakaita manyama amire nerongo mu Mbare uye MDC inoti nyaya yemhirizhonga yava kutekeshera nenyika yose.
Mutauriri weMDC, VaNelson Chamisa, vashora mapurisa vachiti haana zvaari kuita nenyaya yemhirizhonga iyi. Vakurudzirawo Zanu PF kuti iwone kuti vatsigiri vayo havasi kuita zvemhirizhonga.
Vati nyaya yemhirizhonga iri kuitika muMbare pamwe nedzimwe nzvimbo munyika vachaisvitsa kuna mutongi gava pagakava remu Zimbabwe uye vari mutungamiri weSouth Africa, Va Jacob Zuma kuitira kuti SADC iwone zvaingaite nenyaya iyi.
Svondo rapera, Studio7 yakaburitsa nyaya yekuti vanhu vanodarika mazana maviri vainge vaungana pa Harvest House mushure mekutiza mhirizhonga yakaitika munguva iyi muMbare makare.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHarare Residents Trust, VaPrecious Shumba, vanoti chimwe chiri kukonzera mhirizhonga muMbare inyaya yenzvimbo dzekutengesera zvinhu, idzo dzinonzi dzakapihwa chete kunhengo dzeZanu PF